Xog cusub: Saddex arrin oo halis ah oo Muqdisho kusoo wajahan - Caasimada Online
Home Warar Xog cusub: Saddex arrin oo halis ah oo Muqdisho kusoo wajahan
Xog cusub: Saddex arrin oo halis ah oo Muqdisho kusoo wajahan
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia ka taagan cabsi ka dhalatay dib u dhaca ku imaankara doorashada dalka.
Cabsida ugu badan ayaa waxa ay heysataa Musharaxiinta, Siyaasiyiinta iyo Odayaasha ololaha ugu jira kuwa kasoo horjeeda madaxweynaha Somalia Xassan Sheekh oo ah musharax u taagan ka qeybqaadashada doorashada.
Inta u dhexeysa xiliga ololaha ilaa ay ka dhacdo doorashada ayaa waxaa suuragal ah in magaalada Muqdisho ay marti galiso musiibooyin ka dhasha dib u dhaca doorashada oo ay isku maleegaan kuwa ku loolamaaya doorashada.
Musiibooyinka carabka lagu hayo ee la filanaayo ayaa waxaa kamid ah:
1- Dilal loo maleego kuwa indhagaradka ah ee ololaha baaxada weyn ugu jira musharaxiinta.
2- Qaraxyo ay isku maleegaan kuwa uu ka dhaxeeyo loolanka doorasho.
3- Weeraro fool-ka-fool ah oo ay isku maleegan musharaxiin, waxa ayna saadaashu tahay inay dhici doonaan weeraro lagu qaado musharaxiinta itaalka yar.
Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa xiliyada doorashada ka dhaca falal amni darro oo lidi ku ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo, waxaana inta badan dhibta u maleega kuwa heysta Hubka iyo ciidamada.
Ma jirto feejignaan ay muujinayaan Hay’adaha amniga si looga takhluusiyo kuwa wax u gaarsado, waxaana suuragal ah in dowlada qudheeda ay falalkaasi maleegto.